6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > 6-BroMo-4-chloroquinazoline.HCl salt (38267-96-8)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ကဗီဒီယို
MDL အရေအတွက် MFCD01862191
InChI Key ကို InChIKey = JFJNDMNYNYLFLJ-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ Beige အမှုန့်
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 243.49
အပြုံး ClC1 = C2C = ကို C (Br) ကို C = CC2 = NC = N1
အရည်ပျော်မှတ် 160-165 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
◆အကာအကွယ်လက်အိတ် Wear / အကာအကွယ်အဝတ်အစား / မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး / မကျြနှာကို
ရှိုက်ခဲ့လျှင်◆: လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေမှသားကောင် Remove နှင့်တစ်ဦးအတွက်အနားယူစောင့်ရှောက်
မကျြမှောကျ၌ အကယ်. ◆: မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ရေနှင့်အတူသတိဆေး။
ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူလျှင်◆, မျက်ကပ်မှန်ဖယ်ရှားပါ။ ဆက်လက်
◆အသားအရေယားယံဖြစ်ပေါ်လျှင်: ဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပေးချက်ကို / အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူလိုက်ပါ။
◆ပိုးအဝတ်အစားချွတ် ယူ. ပြန်သုံးမတိုင်မီဆေးကြောပါ။
ရေတွင်းတစ်တွင်း-လေဝင်လေထွက်အရပ်ဌာန၌◆ Store မှာ။ တင်းကျပ်စွာတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာထားပါ။
တစ်ဦးကိုအတည်ပြုစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းမှအကြောင်းအရာများကို / ကွန်တိန်နာ၏◆တစ်ခါသုံး
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ဆောင်းပါးများ
Amin / Cyclization ကက်စကိတ်မှတဆင့် Phaitanthrin E နှင့် Tryptanthrin ၏ပေါင်းစပ်
Phaitanthrin အီး biomimetically တက်ကြွစွာအုပ်စုတစ်စုအဖြစ် Ester အုပ်စုတစ်စုကို အသုံးပြု. မီသိုင်း indole-3-carboxylate နှင့် methyl anthranilate သို့မဟုတ် anthranilic အက်ဆစ်ကနေဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ... ။
Helvetica Chimica Acta 2018 vol ။ 101 # 2,
Quinazoline နှင့် Benzopyrano ၏ထိရောက်သော One-Pot Synthesis [2,3-ဃ] N-Bromosulfonamides အားဖြင့် Catalyzed pyrimidine အနကျအဓိပ်ပါယျ
N ကို, N ကို, N ကို 'N'-tetrabromobenzene-1,3-disulfonamide နှင့် Poly (N ကို, N'-dibromo-N ကို-ethyl-benzene-1,3-disulfonamide) မှအသစ်သို့ quinazoline အနကျအဓိပ်ပါယျ၏တအိုးပေါင်းစပ်များအတွက်ထိရောက်သောအဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် အမျိုးမျိုးသော aldehydes ...
Heterocyclic ဓာတုဗေဒ 2017 vol ၏ဂျာနယ်။ 54 # 1 စ။ 215 - 225,
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 6-BroMo-4-chloroquinazoline.HCl salt (38267-96-8)
ကျနော်တို့သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဒါမှမဟုတ်ဓာတုပေါင်းစပ်ဘို့အမြောက်အမြားအတွက် finest6-bromo-4-chloroquinazoline.HCL ဆား synthesize ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုဓာတုထုတ်လုပ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်ယင်း cGMP စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ;
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) အကြောင်း
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCL ဆား Anti-ကင်ဆာဂုဏ်သတ္တိများပြ heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော quinazolines ၏ကဏ္ဍကျရောက်ပါတယ်။
KY04031 ၏ကြည်လင်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ် PAK4 inhibitor (PAK4 IC50 = 0.790μM), ကင်ဆာတိုးတက်မှု၏ယန္တရားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ၏ကနဦးအဆင့်တွင်ဖြစ်၏။ PAK4 inhibitors ၏ဒီဇိုင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ကျောက်သလင်းအဆောက်အဦများအပေါ်အလေးပေး။ ဒီအကဲဖြတ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် quinazoline.With KY04031 ဖို့ KY04031 ရဲ့ triazinecore ပြောင်းလဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထူထောင်ကျနော်တို့ 2,4-diaminoquinazoline ၏တိကျသောအနကျအဓိပ်ပါယျဒီဇိုင်းနှင့် synthesizing အားဖြင့်ပယ်စတင်ခဲ့သည်။
မဟုတ်ရင် 4d အဖြစ်လူသိများသည့်ဖန်တီးအနကျအဓိပ်ပါယျကျနော်တို့ identifiedcompoundPAK4 IC50 = 0.033μM.Thisဒြပ်ပေါင်းများပေါ်တွင်ဂုဏ်သတ္တိများဟန့်တား PAK9 ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါ်၌အထူးနှိုးဆော် G1 အဆင့်ဆဲလ် cycle.It PAK549 ဖော်ပြတာဝန်ရှိသည်သော A4 ဆဲလ်များ၏ကျူးကျော်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် path.From ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အချက်ပြသည့် PAK4-LIMK1 ထိန်းချုပ်ထားကျနော်တို့ဒြပ်ပေါင်းများ9အလားအလာ Anti-ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးနှင့် PAK4 ၏ဇီဝအကဲဖြတ်ဘို့ aprincipal သုတေသနစုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး။
အတော်ကြာ aldehydes, Ammonium acetate နှင့် 2,3-အမိုင်နို-benzophene, Poly (N ကို, N'-dibromo-N ကို-ethyl-benzene-2-disulfonamide) နှင့် N ကို, N ကိုထံမှ quinazoline နှင့် newbenzopyrano ၏ပေါင်းစပ်စဉ်အတွင်း [1,3-ဃ] pyrimidine အနကျအဓိပ်ပါယျ , N ကို 'N'-tetrabromobenzene-1,3-1,3-disulfonamidewere ဟာမရှိမဖြစ် catalysts.These catalytic အေးဂျင့်များဖြစ်ကြသည် benzopyrano [2-ဃ] pyrimidine စဉ်မြင့်မားတဲ့ yields.Quinazolines အများအပြား aldehydes, Ammonium acetate နှင့် 2,3-အမိုင်နို-benzophene ကနေဖန်တီးနေကြသည်ထုတ်လုပ်ရန် acquiredfrom တိကျတဲ့သိသိ Amin, salicyclic aldehydes နှင့် malonitrile ။
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအမှတ် (C) 339.7
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 38267-96-8
ဓာတုနာမကိုအမှီ 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCL ဆား
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 1.763
Flash ကိုအမှတ် (C) 159.24
ဖော်မြူလာအလေးချိန် (ဆ / mol) 243.488
IUPAC name ကို 6-bromo-4-chloroquinazoline
(ကို C °) အရည်ပျော်မှတ် 160 - 165
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 241.925
နာမ် · 4-chloro-6-bromoquinazoline
6-bromo-4-chloroquinazoline ၏ဓာတု & ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို (38267-96-8)
6-bromo-4-chloroquinazoline (38267-96-8) အမှုန့်ပုံစံအတွက်တည်ဆဲတစ်ဦးအဝါနုရောင်ရှိသောအစိုင်အခဲသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုး အလှူရှင်ရေတွက် - အဘယ်သူအားမျှ
အခမဲ့ Rotate နှောင်ကြိုး 0
38267-96-8 computing Properties ကို
XLogP3-AA ကို 3.2
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 25.78A ^ 2
မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု (dyne / စင်တီမီတာ) 60.83
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 241.925
အခိုးအငွေ့၏ Enthalpy (ကီလိုဂျိုး / mol) 56.008
compound Canonicalized ဖြစ်ပါတယ် စစ်မှန်သော
6-bromo-4-chloroquinazoline (38267-96-8) Synthesis လမ်းကြောင်း
6-bromo-4-chloroquinazoline (38267-96-8) GHS ဇက်ဖျေါပွခကျြ
တစ်ဦး irritant.It အဆက်အသွယ်၏အချက်ပေါ် မူတည်. အဆိုပါမျက်စိရောင်ရမ်းခြင်း, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်, သို့မဟုတ်အရေပြားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အဖြစ် 6-bromo-4-chloroquinazoline ခွဲခြားထားပါသည်။ အဆိုပါယားယံအမြဲတမ်းပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှဦးဆောင်, အထူးသဖြင့်မျက်လုံးစူးရှနှင့်ဇွဲဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကျပန်းလက္ခဏာတွေထဲကတချို့ဟာအသားအရေလာခြင်း, ကြဲကြဲမျက်စိ, နာကျင်ခြင်း, မူးဝြေခင်း, ရင်ဘတ်တင်းကျပ်, ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူကြပ်ပါဝင်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကူအညီကောင်းသောအချိန်အတွက်အုပ်ချုပ်လျှင်, အန္တရာယ် downtremendously လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်အတူအပြည့်အဝအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံကိုရရှိပါသည်သည့်အခါ 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) မှသာလျှင်ကိုင်တွယ်။ သငျသညျအတွေ့အကြုံမှန်လျှင်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်အသုံးပြုသူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပါ။
နိုင်ငံတကာဓာတ်ခွဲခန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများနှုန်းအတိုင်းအတည်ပြုအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်။ တစ်ဦးစံ Full-မျက်နှာမျက်နှာဖုံးနှင့်အတူမျက်နှာကိုဖုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန်နှင့်, NIOSH သို့မဟုတ်မာခ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာသောအသက်ရှူကိရိယာ, ကိုအသုံးပြုပါ။ မိုးသည်းထန်စွာရော်ဘာဖိနပ်နှင့် impervious လက်အိတ်ဝတ်ဆင်။
ဒါ့အပြင်သငျသညျအမြင့်ဆုံးလေထုသန့်စင်ခြင်းနှင့် aeration များအတွက်အငွေ့ပါးပျဉ်းနှင့်အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်ကောင်းစား-တပ်ဆင်ထားတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာအလုပ်မလုပ်အာမခံပါသည်။ သင်တစ်ဦးအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ဧရိယာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, outdoors.Do ဖုန်မှုန့်, အငွေ့, အငွေ့, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ကိုရှူရှိုက်မထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပါ။
ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်ဧရိယာအတွင်းရှိထုတ်ကုန်တွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အရပျ၏အခွအေနစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်သေချာပါစေ။ ရေရှည်သိုလှောင်မှုအဘို့, -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်အအေးခန်းစောင့်ရှောက်လော့။
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ဖွင့်သော့ခတ်လုံခြုံကွန်တိန်နာ, ၌၎င်း, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ personnel.Always ၏လက်လှမ်းမမီထဲကတံဆိပ်ခတ်ထားရမည်မူရင်းထုပ်ပိုးအတွက်ထုပ်ပိုး။
ထိုခဏခြင်းတွင် 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCL ဆားကိုင်တွယ်ပြီးနောက်, ညစ်ညမ်းအဝတ်ကိုချွတ်ရေနှင့် soap.Strip ၏ရက်ရက်ရောရောပမာဏနှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လက်လက်မဆေးခြင်းဖြင့်သင့်လျော်သောသန့်ရှင်းရေးစောငျ့ရှောကျတဖနျသူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ကသူတို့ကိုရှင်းလင်း။
အဆိုပါအသုံးပြုသောပစ္စည်းများ, ညစ်ညမ်းပုလင်း, spillages ယိုနှင့်အချည်းနှီးသောကွန်တိန်နာစုဆောင်းနေဖြင့်ခုံတန်းလျားရှင်းလင်းပါ။ ယာယီဒေသခံတစ်ဦးလိုင်စင်စွန့်ပစ်ခြင်းကုမ္ပဏီမှသူတို့ကိုပယ်မပေးခင်တခုလုံခွက်၌ဤအလျော့စောင့်ရှောက်လော့။
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ၏ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ရှောင်ရှားရန်တစ်ခုမှာသေချာနည်းလမ်းအကြံပြု personalprotective ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ချပြီးဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အလားတူပဲမျက်စိရေချိုးပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းနှင့်အတူနီးကပ်သည့်နာကျင်ကျိန်းဖြစ်ပေါ်စေသည့်နောက်ထပ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု minimize ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှသာအဓိကအားအန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး aerated ဧရိယာဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရွှေ့ပါ။ အသက်ရှူအခက်အခဲများသတိလစ်မေ့မြောခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှုမဝြခင်းမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာ Watch နှင့်အတုအသက်ရှူကိရိယာနှင့်အတူအသက်ရှူထောက်ခံပါတယ်။ အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြာလော့။
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် 10 မိနစ်ထက်မနည်းများအတွက်ပါးစပ်သုတ်ခြင်း။ နို့သို့မဟုတ်ရေ၏ထက်ဝက်တစ်လီတာအထိသောက်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပျို့, ဝမ်းလျှော, ဒါမှမဟုတ်မူးဝြေခင်းအဖြစ်ပြင်းထန်လက္ခဏာတွေထဲက Watch, သင်တစ်ဦးကိုကိုးကားသကဲ့သို့သင်တို့နှင့်အတူဤဘေးကင်းလုံခြုံမှု data တွေကိုစာရွက်သယ်တစ်ဦးအဆိပ်စင်တာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ medic.As ကနေချက်ချင်းအာရုံကိုရှာကြာလော့။
ဒါကအန္တရာယ်အဓိကအား 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) သုံးနေစဉ်အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်သောက်သုံးသည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီးလာပါတယ်။ အသုံးပြုမှုကိုအပြီးလက်ကိုဆေးကြောဖို့ပျက်ကွက်လည်းမတော်တဆမျိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
ရှေ့တော်၌ထားလျှင်, မျက်ကပ်မှန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် 15 မိနစ်ရေအေး၏လုံလောက်သောပမာဏနှင့်အတူသုတ်ခြင်း။ မျက်တောင်ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ကြောင့်မျက်စိမထိခိုက်စေ 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား၏မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေကို (38267-96-8) အား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြာလော့။
ထုတ်ကုန်အသားအရေနှင့်အဆက်အသွယ်စေသည်အခါ, ဆပ်ပြာနဲ့ပတ်ပတ်လည် 15 မိနစ်ဘို့ရေကိုအပြေးတွေအများကြီးအတူဧရိယာရေချိုး။
မျက်ကပ်မှန်သို့မဟုတ်ပိုးအဝတ်နှင့် shoesought ဒီပထမဦးဆုံးအကူအညီထွက်တင်ဆောင်လာသောမတိုင်မီဖယ်ရှားခံရဖို့, သတိပြုပါ။
စည်းကမ်းနှင့်အမျှအကာအကွယ်ဂီယာကိုမီးရှို့သည့်အခါအလားအလာအန္တရာယ်ရှိသော chemicals.6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ဖြစ်နိုင်သည်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့နဲ့အငွေ့သို့ပြိုကွဲလိမ့်မယ်နှငျ့ဆကျဆံတဲ့အခါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ self-ပါရှိသောအသက်ရှူယန္တရားဝတ်ထား၏လိုအပ်မှုကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်, ဒါမှမဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်နှင့်အတူမီးလောင်ထုတ်ထားပါ။ အဆိုပါ extinguishing မီဒီယာကိုမီးပြင်းထန်မှုနှင့်အကြောင်းမရှိအေးဂျင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အဘယ်သူမျှမဒေတာ PBT ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်ဆိုးရွားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ abioaccumulativecompound အဖြစ် 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ခွဲခြားထားသျောလညျးက theregular ရေသင်တန်းများဝင်ခွင့်ပြုဖို့မစောင့်ရှောက်ရမည်။
သဲများကဲ့သို့တစ်စုပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူရောနှောနေဖြင့်ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်မဆိုယိုဖိတ်ကို clean up ။ အစိုင်အခဲပြည်နယ်အတွင်းရှိလျှင်, ထုထက်တောင်ဦးနှင့်တစ်ဦးတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်းစုဆောင်းသင့်လျော်စွန့်ပစ်ခြင်းအဘို့အစီစဉ်ပါ။
6-bromo-4-chloroquinazoline ၏တည်ငြိမ်မှု & reactivity (38267-96-8)
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်, အလင်း, မီးလျှံ, အပူ, ဒါမှမဟုတ်မီးစများ၌၎င်းအောက်ရှိထုတ်ကုန်လက်အောက်ခံမထားပါနဲ့။ အလားတူပင်ခိုင်မာတဲ့ခြေစွပ်, ၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများ, ဒါမှမဟုတ် acids.These အခြေအနေများထိတွေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်း CO ဖွဲ့စည်း, 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ၏ပြိုကွဲစေနိုင်ပါသည်ရှောင်ရှား, CO2, HCl, NOx နှင့် HBr ဓာတ်ငွေ့။
6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ၏ပပျောက်ရေးဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ , အဆင်ပြေစွန့်ပစ် disposal.Alternatively များအတွက်လိုင်စင်ရဒေသခံအာဏာပိုင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပါတစ်စက်နှိုးအရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်အတူထုတ်ကုန်ရောမွှေပြီးဓာတုမီးဖိုအတွက်မီးရှို့ရမည်။
6-bromo-4-chloroquinazoline (38267-96-8) သင်္ဘောအင်ဖို
သငျသညျ, 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCl ဆား (38267-96-8) ကိုင်တွယ်အားလုံးသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများလိုက်နာအဖြစ်။
အဆိုပါ APICMO အဖွဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါဝင်သောအားလုံးနယ်ပယ်များတွင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်တဲ့သူသိပ္ပံပညာရှင်များ, သုတေသန, မူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ပစ္စည်းများနှင့်ဘဝသိပ္ပံနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများပေါင်းစပ်၏ပါဝင်သည်။
6-bromo-4-chloroquinazoline (38267-96-8) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သငျသညျ 6-bromo-4-chloroquinazoline.HCL အမြောက်အများအတွက်ဆားသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူဖြစ် sign up ကိုနှင့်ကိုးကားကြည့်ရှုရန်အတွက် log quantities.Just အမိန့်ပေးနိုင်သည်။ အမိန့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ။
Chem သတင်းရပ်ကွက်များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Directories ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်, 2008, ဓာတုစက်မှု, စာမျက်နှာ 1001-1010 ။
အလန် R. Katritzky, စာမျက်နှာ 104 အားဖြင့်တည်းဖြတ် Heterocyclic ဓာတုဗေဒ, အတှဲ 462 ခုနှစ်တွင်တိုးတက်လာ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 4,4-Difluorocyclohexanone, ကဏ္ဍများ 1-9 ။